အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Sony က Spotify သဘောတူညီချက်၏မျက်နှာသာအတွက် PlayStation Music ကို Unlimited ဝန်ဆောင်မှုပုဆိန်” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 28 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2015 16.24 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Sony ကသူ့ရဲ့ဂီတ Unlimited streaming များဂီတဝန်ဆောင်မှုပိတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်, ၎င်း၏ consoles စ span လိမ့်မည်ဟု Spotify နဲ့မိတ်ဖက်များ၏မျက်နှာသာအတွက်, စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet.
Spotify Play Station ကဂီတကိုခေါ်သစ်တစ်ခုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သီးသန့်မိတ်ဖက်ဖြစ်လိမ့်မည်, အတွက်နွေဦးရာသီ၌ဖွင့်လှစ်လတံ့သော 41 နိုင်ငံပေါင်း. Music ကို Unlimited, လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်ဖြစ်ပါသည် 19 နိုင်ငံပေါင်း, အပေါ်ကိုပိတ်ဖို့လိမ့်မည် 29 မတ်လ.
Play Station ကဂီတအားဖြင့် Spotify များအတွက်ပေးဆောင် Sony ကဖောက်သည်များကသူတို့ရဲ့အမျိုးမျိုးသော devices တွေကိုဖြတ်ပြီး streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်, 30 သီခငျြးမြား၏၎င်း၏ catalog browsing, ဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖွင့်စာရင်းများကိုနားထောင်ခြင်း, ဂိမ်းကစားနေစဉ်အတွင်းနှင့်ဂီတ streaming.
"တစ်ဦးက စား. နှင့် Play Station အမျှ4အသုံးပြုသူကိုယ့်ကိုကိုယ်, ငါသည်ငါ့ဖီဖာတေးသံချနိုင်မှစူပါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် 15 အာဆင်နယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီနွေဦးကိုက်ညီ,"Spotify ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒံယလေသ ek ကပြောပါတယ်, မိတ်ဖက်ဖြစ်မှုကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အဖြစ်.
အဆိုပါသဘောတူညီချက်ဂီတ Unlimited မရှိ-ယုံကြည်စိတ်ချမှု၏တစ်ဦးမဲသည်, အရာမူလကစတင် 2010, နှင့်ခဲ့ ရဲ့ start အားဖြင့်တသန်းတက်ကြွစွာသုံးစွဲသူများက 2012. သည် PlayStation console ကိုအတွက်ကို bundle ခဲ့ပေမယ့်, Sony ကကတည်းကကြောင့်ကိန်းဂဏန်း updated မမူ, သောယူ-up ကစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြု.
အခုတော့ Spotify ၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ဆွဲဆောင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသည်လိမ့်မယ် 64 streaming များဂီတများအတွက်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းပေးဆောင်စတင်ရန် Sony ရဲ့ PlayStation Network ၏သန်းတက်ကြွစွာသုံးစွဲသူများက, သူတို့ကသူတို့ရဲ့လက်ရှိ PSN ပိုက်ဆံအိတ်တဆင့်လုပ်ဖို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ရာ.
အဆိုပါကုမ္ပဏီများ PlayStation Music ကိုတဆင့်တစ်ဦး Spotify ကြေးပေးသွင်းကုန်ကျမည်ဘယ်လောက်ကြေညာသို့မဟုတ် Sony က£ 9.99 လစဉ်စျေးနှုန်း၏တစိတ်တပိုင်း subsidizing လိမ့်မည်ရှိမရှိကြသည်မဟုတ်.
တိုင်း Sony က device ကိုအခမဲ့ရလိမ့်မည်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအစမရှင်းလင်းသည်, Spotify ၏ကြော်ငြာ-ထောက်ခံဗားရှင်း, သို့မဟုတ်သတိပေးလူပေးဆောင်စတင်သို့မဟုတ်အသုံးပြုရပ်တန့်ဖို့ရှေ့တော်၌ထိုသဘောတူညီချက်မျှသာ Spotify ရဲ့ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှု၏ကန့်သတ်အခမဲ့အစမ်းဇျောပါမညျရှိမရှိ.
ယခင်လိုလျှင်, မိတ်ဖက်ဖြစ်မှုကို Spotify အတွက်အလွန်အရေးပါသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်, အရာ လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပါတယ် 60 သန်းတက်ကြွစွာသုံးစွဲသူများက, အတူ 15 သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်သူတို့ကိုသန်း. အဆိုပါကုမ္ပဏီအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လာသည်အတက်လာအောင်တွန်းအားပေးနေသည် 2015 သော - Apple ကမှ ၎င်း၏စည်းချက်သံဂီတကို streaming service ကိုသွားမည်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်စတင်ဖို့စီစဉ် - မှ Google ရဲ့ YouTube Music Key ကို.
"ဒီမိတ်ဖက်ဂီတမှာအကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုပြီးဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအတူတူလာမယ့်, Spotify နဲ့ PlayStation Network နှစ်ခုစလုံး၏တက်ကြွနှင့်အသည်းအသန်အသိုင်းအဝိုင်းအကျိုးရှိမည်သည့်,"Sony က Computer ကို Entertainment ကသူဌေးကအန္ဒြေအောက်လွှတ်တော်ကပြောပါတယ်.
များ၏စာရင်း 41 PlayStation Music ကို Sony ရဲ့ဇာတိဂျပန်မပါဝင်ပါဘူးဘို့နိုင်ငံများတွင်ဖွင့်လှစ်, ဂီတ Unlimited ဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်မှာ ဇူလိုင်လထဲမှာဖွင့်ဖို့ကိုပထမဦးဆုံးကြီးတွေကို streaming ဂီတန်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခု 2012.
Spotify နှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အချို့သောအချိန်များအတွက်ဂျပန်ရောက်လုပ်ကိုင်မည်ခဲ့ကြ, ဒါပေမဲ့ဒေသခံဂီတတံဆိပ်များနှင့်အတူလိုင်စင်သဘောတူညီချက်များသပိတ်မှောက်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးကြာကြာသူတို့ထင်ခဲ့ထက်ပြီတွေ့ပြီ.
အဆိုပါ Sony ကစာချုပ်ဂျပန်အတွက် Spotify ပိုမိုမြန်ဆန်လမ်းကြောင်းဇျောနိုငျ, အမေရိကန်နောက်ကွယ်မှဂီတရောင်းအားများအတွက်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအများဆုံးအကျိုးအမြတ်ဈေးကွက်, ဒါပေမယ့် Sony က "ဂျပန်အတွက် PS ဂီတဝန်ဆောင်မှုသေးစိတ်ပိုင်းဖြတ်သည်မဟုတ်" ကြောင်းယနေ့ပြောသည်နှင့် "လာသောအခါအဆင်သင့်နောက်ထပ်အသေးစိတ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မည်" ဟု.
• Spotify CEO ဖြစ်သူက၎င်း၏တန်ဖိုးဂီတသမားနားချဖို့ဆိုတာ '' ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အပြုပါရန် '' လိုလား
• Spotify ကိုငါ့ဂီတအချက်အလက်များ၏ခြောက်နှစ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုနားလည်ပေ?